Ny dingana iray tena manan-danja aorian 'ny fanatontosana ny fanamboarana lehibe dia ny dingan' ny fananganana ilay trano. Ity no famolavolan'ny karazana tsipiriany kely sy zavatra rehetra izay hampisy ny rivotry ny trano. Ny efitrano tsirairay dia mendrika fiheverana manokana momba ity raharaha ity.
Inona no tokony hijereko rehefa mandoko trano iray?
Tokony ho fantatsika fa ny efitrano tsirairay ao an-trano dia manana ny entany manokana, ary ao amin'ny laharam-panorenana, mila raisinao izany. Ny famolavolana ny lakozia dia ampahany manan-danja amin'ny fifankatiavana sy ny fampiononana ny trano fonenana, satria eto dia mandany fotoana be loatra isika. Ny vahaolana tany am-boalohany dia ny handravaka ny fitaovana sy ny firavaka ampiasaina amin'ny trano fonenana, ka mahatonga azy ireo asa kanto. Hanampy tsipiriany kely ny antsipiriany: watches avy amin'ny fitaovana an-dakozia, lampihades, lambam-baravarana tsy mahazatra.
Zava-dehibe iray hafa - ny fandravahana ny efitrano fandriana. Ny lamina tena izy dia tena zava-dehibe eto. Ny tsara indrindra ho an'ny toerana fialan-tsasatra mifanaraka amin'ny loko pastel, mampitombo ny habeny dia hanampy amin'ny fifangaroan'ny fotsy sy manga. Raha mamela ny habeny ny efitrano fatoriana dia azonao atao ny mifidy sehatra hafa ho an'ny toerana fialantsasatra miaraka amin'ny voninkazo vaovao, sezakely ary seza.
Raha miresaka momba ny fanamboarana efitrano fandraisam-bahiny, dia takatsika fa ao amin'io efitrano io dia tena zava-dehibe ny anjara asan'ny entana toy ny vazy , tavy fotsy; endriky ny fanorenana manda (sary hosodoko, fitaratra, fitaratra); karazana sary, labozia sy labozia. Ny akorandria fotsy miaraka amin'ny mavo sy beige dia tsara indrindra ho an'ny efitra fandraisam-bahiny. Ny tena manan-danja dia ny fahafahana misafidy ny lambam-baravarana tsara, ary ny fanoratana ny vera. Azo afokina amin'ny sary hosodoko izy io na fitaratra manokana.
Manamboatra ny trano fandroana - andriamanitra fotsiny izany ho an'ny olona mamorona. Voalohany, afaka mampiasa efijery manokana izay napetraka eo ambanin'ny fitoeran-trano ianao ary hamela anao hanafina ny zavatra simika rehetra ao an-trano. Ireo horonan-tsary, toy ny orinasa, dia afaka hodiovina amin'ny lamina sy loko samihafa. Faharoa, misy alokaloka samihafa azo entina any amin'ny efitra fandroana noho ny servieta malamalama sy ny teokandro. Amin'ny fomba isan-karazany, azonao atao ny mandresy ny rindrina tsotra amin'ny alàlan'ny fisafidianana endrika na tendrombohitra mahaliana. Ao amin'ny trano fandroana, azonao atao ny manamboatra ny lamba firakotra, fitaratra, fanasan-damba ary zavatra kely.
Hevitra mikasika ny fanokafana orinasa
Eo am-piandohana, mila mipetraka amin'ny singa manan-danja toy ny varavarankely iray ianao. Ny fanorenana ny varavarankely dia mahatonga ny trano ho maotina kokoa. Azonao atao ny mifidy ho an'io fikasana io, saingy afaka mijanona amin'ny jirony na ny fiaramanidina. Miankina amin'ny loko, ny tontolon'ny asa ary ny fomba fiasa, misy ny fananganana an'ity na ny fahatsapana ny habaka. Ny hevitra tsara ho an'ny fanorenana anatiny dia ny famokarana lamba. Ity fitaovana ity dia ampiasaina ho toy ny rindrina mandrakotra, ary fototry ny tanjaky ny rafitra. Ny endriky ny trano sy ny rindrina toy izany dia toa tsy mahazatra sy manankarena.
Miaraka amin'ny fanampian'ny sarimihetsika mahaleo tena manokana dia manamboatra zavatra maro ao an-trano. Izany dia fomba mahatalanjona amin'ny fanoratana, ohatra, ny tratran'ny mpanefy. Ny trano fialan-tsasatra amin'ny ankapobeny dia tsara indrindra ho an'ny famolavolana hevitra. Ohatra, izy ireo dia afaka manodina ny fanampiana ny vatany rehetra, na manao sary, sary hosodoko. Fanamboarana ny efitranony - na dia tsy mora aza, fa mahaliana.
Ny tranga samihafa dia ny batterintsika. Afaka mamafa mora foana ny fomba fijery ny efitrano izy ireo. Noho izany, azo atao ny mampiasa safidy roa - na ny fametrahana ny efijery mitovy amin'ny ampiasaina ao amin'ny efitrano fandroana, na ny manamboatra ny batterie amin'ny alàlan'ny fametahana sary samihafa eo amin'ny elany ary manamboatra azy amin'ny laka.
Ny fanorenana araka ny tokony ho izy dia mamorona fihetseham-po sy fifankatiavana ao an-trano.
Vondron'ny varavarankely vita amin'ny vato voajanahary
Panels ho an'ny socle
Sary an'i Wallis
Cot miaraka amin'ny garderobe
Rindrin'ny ankizy ao amin'ilay efitrano
Lamina Transformer ho an'ny laptop
Ahoana ny fandrakofana ny tafo?
Hazo pergolas ho an'ny trano fatoriana
Iza no solosaina voafidy ho an'ny tokantrano?
Ny fahaketrahana mikiakiaka - inona izany ary ahoana no hiatrehana izany?
Gubonaduvatelstvo: 25 vavy izay tsy afaka nanakana ny fikatsahana hatsaran-tarehy!
Ny akanjo marevaka - ireo modely tsara indrindra isan'andro
Ahoana ny fomba hanesorana ny takolaka sy fanaovana taolam-paty?
Ny tarehin'i Nemet
Noho ny fitsaboana ny tenda mba hanomezana sakafo ny maman?
PV-panohanana ho an'ny lakozia
Hazo avy amin'ny tady amin'ny tanana manokana
Sweets ho an'ny Halloween
Fitaovana ho an'ny sôkôla
Karazana hoditra fohy - 45 modely maoderina indrindra ho an'ny fotoana rehetra
Nahoana no mamirapiratra ny tavy?